RW Rooble oo amar dul dhigay Wasiirka Maaliyadda | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo amar dul dhigay Wasiirka Maaliyadda
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ayaa lagu tiriyaa in uu ku daaban yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, wuxuuna bishii April ee sanadkaan sheegay in Dowladdu ay wajaheyso dhaqaalo la’aan xooggan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ku cad waraaqda Tixraaceedu yahay (XRW/418/09/2021) kuna taariikheysan 9/09/2021, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa amar maaliyadeed dul dhigay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, kaas oo ku aaddan in aan bankiga dhexe laga saari karin wax qarsh ah oo aan la ogeysiin Ra’iisul Wasaaraha.
Waraaqda oo ka soo baxday xaafiiska RW Rooble, xilli la filayay inuu xilka ka xayuubiyo Wasiirro uu ku jiro Bayle, ayaa la ogeysiiyay Xisaabiyaha Guud, Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda XFS, Wasiirudowlaha Wasaaradda Maaliyadda XFS, Guddoomiyaha Bankiga Dhexe iyo Hanti-dhorwaha Guud ee Qaranka.
Ra'iisul Wasaaraha XFS ayaa faray Wasaaradda Maaliyadda oo ay warqaddani sida tooska ah ugu socoto; in aan la bixin karin wax kharash, ilaa oggolaansho laga helo RW XFS, isla-markaana aan wax lacag ah laga soo qaadi Karin qoondada DFS ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaan SDRs iyada oo aan oggolaansho laga helin RW XFS.
“Warqaddaani waxay beddelaysaa warqaddii tixraaceedu ahaa XRW/0449/07/2020, kuna taariikaysnayd 15/11/2020." Ayaa ugu danbeyn lagu yiri waraaqda Ra’iisul Wasaaha.
Go’aanka maaliyadeed ee uu qaadty Rooble, ayaa lagu macneeyay tallaabo uu uga hor tagayo in amarro ka yimaada Xaafiiska Farmaajo, lacag looga saaro Bankiga Dowladda.